Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay dagaal beeleed ka socda magaalada Caabudwaaq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan shan qof oo ku dhimatay dagaal beeleed ka socda magaalada Caabudwaaq
November 16, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Dagaalada sokeeye ayaa caan ka ah dhulka ay Somaalida degto. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof oo dhinacyada dagaalamaya ah ayaa ku dhimatay ku dhawaad toban kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka socda magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, sida ay wararka sheegayaan.
Dagaalka oo daba socday dagaalo hore oo labada dhinac ku dhexmaray halkaas ayaa bilaabmay maanta oo Arbaco ah, waxaana wararka laga helayo dadka deegaanka ay sheegayaan in uu wali socdo.
Dagaalada sokeeye ayaa Soomaaliya caan ka ah waxaana u badan waxyaabaha keena aanooyin qabiil iyo isku haysasho dhul.
Dagaalada sokeeye ayaa caan ka ah dhulka ay Somaalida degto waxaana u badan waxyaabaha keena aanooyinka qabiil iyo isku haysashada dhulka.